kkchha.com:: मेसेन्जरको लाइट भर्जन,गज्जबको कुराकानी गर्न सकिने…
मेसेन्जरको लाइट भर्जन,गज्जबको कुराकानी गर्न सकिने…
तपाइको एन्ड्रोइड फोन पुरानो भएकाले नयाँ मेसेन्जरमा अपडेट गर्न सकिरहनु भएको त छैन ? अब तपाइका यस्ता समस्याहरूको समाधानको जुक्ति फेसबुकले ल्याएको छ । फेसबुकले भर्खरै मात्र विकास गरेको एप फेसबुक मेसेन्जर लाइटले तपाइका यी समस्या समाधान गर्न सक्नेछ । सुस्त इन्टरनेट कनेक्सनका कारण के मेसेन्जर बारम्बार डिस्कनेक्ट त भइरहेको छैन ? फेसबुक मेसेन्जरमा च्याट गर्दैहुन्छ तर इन्टरनेट बाधक त बनिराखेको छैन ?
फेसबुकले सुस्त इन्टरनेट कनेक्सन र कम मेमोरी रहेका पुराना फोन प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै फेसबुक मेसेन्जर लाइट सार्वजनिक गरेको हो । यस एपको प्रयोगले सुस्त गतिको इन्टरनेटमा पनि गज्जबको कुराकानी गर्न सकिने फेसबुकको दाबी रहेको छ ।
१० एमबी मेमोरी रहेको यो एप पुराना एन्ड्रोइड फोनहरूमा पनि सरल तरिकाले चल्न सक्नेछ । यस एपमा मेसेन्जरमा भएका सबै खास विशेषताहरू रहनेछन । यस एपबाट प्रयोगकर्ताले मेसेज पठाउन, फोटो सेयर गर्न, र स्टिकरहरू आदान प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
यस एपको विश्वब्यापी रोल आउटको क्रममा अहिले यो एप केन्या, ट्यूनिसिया, मलेसिया, श्रीलंका र भेनेजुएलामा मात्र उपलब्ध छ । यसलाई छिटै नै संसारभर उपलब्ध गराउने योजनामा फेसबुक रहेको अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन् । यो एप एप्पलका फोनहरूका लागि भने उपलब्ध नहुने फेसबुकले जनाएको छ ।
श्रोत : आईसिटि